टोल विकास संस्थाद्धारा ब्लड क्यान्सर पिडीत केसीलाई सहयोग – Rajmarg Online
टोल विकास संस्थाद्धारा ब्लड क्यान्सर पिडीत केसीलाई सहयोग
तुलसीपुर,५ चैत | दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ७ प्रसेनी निवासी ब्लड क्यान्सर पिडीत धनराम केसीको उपचारका लागी सुन्दर बस्ती टोल विकास सस्थाँले आर्थिक रकम सहयोग गरेको छ ।
मगंलवार पिडीत केसीको घरमा गई टोल विकास सस्थाँका अध्यक्ष चेत बहादुर जिसी लगाएतको टोलीले २० वर्षीय केसीको उपचारमा सहयोग पुगोस भनी ६६ हजार नौ सय ८५ रुपैया आर्थिक रकम हस्तान्तरण गरेको हो । गत मसिंर महिना देखि ब्लड क्यान्सर पिडीत भएका केसीको हाल भारतको राजगान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भैरहेको पिडितका बुबा परशुराम केसीले जानकारी दिनुभयो ।
छोराको उपचारका लागी अहिले सम्म २१ लाख आइसी रकम खर्च गरिसक्यौ, अझै ५० लाख आइसी भन्दा धेरै रकम लाग्ने डाक्टरको भनाई छ,उहाँले भन्नुभयो । उहाँले छोराको उपचारका लागी आर्थिक रकम अभाव भएकाले सहयोगका लागी अपिल समेत गर्नुभएको छ ।
साथै पिडित केसीको उपचारका लागी सहयोग गर्न चाहाने व्यक्तीले नेपाल एसबिआइ बैक लिमिटेड घोराहीको खाता नं २०६१५२४०७००५७६,एमेरेष्ट बैकं लिमीटेड तुलसीपुरको खाता नं ०३३००५१८२००२२३ र ९८४७८५२७५ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
ब्लड क्यान्सर पिडीत धनराम केसी काठमाडौमा बसेर अध्यन गर्दे आउनुभएको थियो ।
टिकटकबाट म्युजिक भिडियोमा जम्दै सुधीर
गाउँमा गस्ति गर्न संयुक्त सुरक्षा फोर्स परिचालन
कोइलाबासको फर्केर आउला त जवानी ?
सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लिल गतिविधि बढेकोतर्फ सचेत हुन आग्रह
शाहरुखलाई फ्यानले सोधे – अब ५० वर्षपछि घोषणा गर्ने हो नयाँ फिल्म ?
अनुहार चम्काउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय